Sharciyada cusub ee Sweden ka dhaqan-galay maanta | Somaliska
Maanta waxaa dhaqan-galay 70 sharciyo cusub oo uu baarlamaanka Sweden ansixiyay sanadkii tagay. Sharciyadaan cusub ayaa qabanaya qeybo badan oo ka mid ah nolosha bulshada ku dhaqan wadanka. Hoos waxaan ku soo koobeynaa kuwa ugu muhiimsan.
Aqoonsiga oo laysku waydiin doona xuduudaha Sweden, qaasatan xuduuda Denmark. Qof aan aqoonsi wadan looma ogolaan doono in uu raaco tareenada, doomaha iyo basaska ka dhex-shaqeeya labada wadan.
Daawada oo lacag la’aan looga dhigayo caruurta da’dooda ka yartahay 18-sano.
Dadka waayeelka ah ee dhaqaalahooda ka yaryahay 240.000 sanadkii ayaa canshuurta laga dhimi doonaa.
Jaaliyadaha ayaan bixin doonin canshuurta MOMS marka ay wax ka iibsadaan dukaamada iibiya alaabaha macmalka ah.
Lacagtii xanaanada caruurta (vårdnadsbidraget) oo la joojinayo ka bilaabata 1 febraayo.
Aabayaasha ayaa xaq loo siin doonaa 1 bil oo dheeri ah in ay caruurtooda la qaataan.
Lacagta canshuurta wadada ee laga qaado baabuurta Stockholm ayaa la kordhinayaa, iyadoo laga dhigi doono 35 kr halka ay maanta tahay 20 kr.
Canshuurta shidaalka oo la kordhinayo.
Lacag dheeri ah oo la siinayo kamuunada iyo hay’daha dowlada si ay u boobsiiyaan suuq galinta qaxootiga cusub.
Sharcidaas ayaa ugu muhiimsan kuwa dhaqan-galaya maanta oo taariikhdu tahay 1 Janaayo 2016.
January 1, 2016 at 15:53
Lacagta caruurta xanaanada oo la joojinaayo bisha februari qodobkaas SI fcn MA aanan u fahmin ee halii jilciyo
Awal va gobolkaan joog lagu ma wadan jirin lacagta vårdnadsbidraget khadiija waa lacag 3000 kr ah oo lasiiyay wali da ilaa ilmuhu 3 sang ka gadhay o say guriga ugu hayaa waxaa laga wataa qabo kamida wadankii saa filayo
Flip Sharma says:
ilahey 2016 hanoga dhigo mid aan ku helno cafimad, Nabad, Farxad, Dambidhaaf Amiin allah naga siiyo
Maxaa ugu muhiibsan oo saameyn ku lahaan soo galootiga khaasatan soomalida
saxiib lacagtaa la joojinayo aad sheegayso noo jilci manan fahamin waligay ma maqal
January 1, 2016 at 21:06
Asc jimcaale maa ka jawaabtid suaalaha ay ku weydiiyeen asxbta ku xeran page kaaga si ay u fahmaan mahadsanid
Somali lacag unbey ka fakaran lacagta la jojinayo wa midan wadanku awalba ka sineyn iyo kommunaduba wa qofka ilmaha an geyn Dagis ilaa 3 jir marka sanad garo wa inad geysan hada heysaneyso na cidina wax ma kugu sineyso ee odagaagu wa inu ku xamaala oo kugu filan yahay . Mafhuuum
January 2, 2016 at 12:47
Shar sheege aaa tahay lama oran Karaaa Jim Kkk hal maalin Kuma oran adoo war fcn sooo qoraayo Kk xagee kaaa wada aaadeen wararka fcn ama lama baran gacan taada war fcn in ey qorto
Wax noo room manaqaanee wixii roon rabaa og ee talada rabi saarano caafimaadna alaha keeno
wadanka awalba adaa ku soo raadsatey cidaan ee iska dulqaado
Alxmdulilah Ilahay Ha Nooga Dhigo Sanad Khyrkisaa Waata Amiiiin
alxamdulilah ilahay mid wanagsan hanooga dhigo sanadkan